I-Android ngoku inegosa layo "Fumana i-iPhone yam" | IPhone iindaba
Iindaba ze-IPad | | Ukhuphiswano, iOS 7
Abasebenzisi be-IOS banethuba lokufumana eyethu i-iPhone, i-iPad okanye iMac ngenxa yesicelo «Khangela i-iPhone yam«, Esifumanayo njengesicelo se-iPhone kunye ne-iPad, okanye ikwafumaneka kwisikhangeli sayo nayiphi na ikhompyuter enokufikelela kwi-intanethi. Ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo, Yabuya ngo-2010 xa iApple yasungula esi sicelo, kwaye ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo, bekungekho nto injalo nakwezinye iiplatifomu ezihambayo (umntu undilungisa ukuba akunjalo). Abasebenzisi be-Android, ukusukela ukuphela kwale nyanga ka-Agasti baya kuba nakho ukonwabela usetyenziso olufanayo lwezixhobo zabo ze-Android.
Nangona ezinye iimveliso zongeze lo msebenzi kwizixhobo zazo ngokusetyenziswa okufanayo ne-Apple, kwakungekho sicelo esisemthethweni se-Android esingakunceda ufumane isixhobo sakho esilahlekileyo. Isicelo siza kusebenza kuphela kwizixhobo ezine-Android 2.2 nangaphezulu, kwaye njengoko ibhlog esemthethweni ye-Android isitsho, iya kufumaneka ukusuka ekupheleni kwenyanga, kwaye kuya kubakho isicelo esisemthethweni sokufumana izixhobo. Ngelo xesha imisebenzi ekhoyo bambalwa kakhulu-Yenza isandi sokukhala kwesixhobo ngevolumu ephezulu, kwaye ucime umxholo wesixhobo, kunye nokukwazi ukusifumana emephini.
Njengoko besitshilo kwizihlandlo ezininzi, xa u-Apple etyholwa ngokukopa i-Android, ukukopa eyona misebenzi yeqonga ukuyongeza kweyakho yinto enceda abasebenzisi kwaye eyenzeka ngandlela zonke, ayisiyi-Apple kuphela ekopa amanye amaqonga, nangona uninzi lunyanzelisa ukuqinisekisa okwahlukileyo. Sicinga ukuba kungekudala i-Android iya kuba nazo ezinye iindlela ezininzi esinokuzisebenzisa kwisicelo se-iOS, njengokuthumela imiyalezo kwiscreen secebo elilahlekileyo, okanye inkqubo entsha yokhuseleko kwi-iOS 7 ethintela ukubuyisela isixhobo nge «Fumana iPhone yam» isebenze ngaphandle kokungena iqhosha iCloud.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Uyisebenzisa njani inkonzo "Fumana i-iPhone yam"
Imvelaphi Ibhlog esemthethweni ye-Android
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 7 » I-Android ngoku inegosa layo "Fumana i-iPhone yam"
Ayisiyonto intsha ukuba iinkampani zikope ngokwazo, ukuba oku kunceda ukutyebisa amava omsebenzisi, wamkelekile, ndingumsebenzisi wawo omabini amaqonga kwaye andikuthandi ukusikelwa umda okubekwe bobabini.
Andiyifuni .. Ndibhatalele iCerberus into ethile .. xD
Uyabona ukuba lowo ubhale inqaku akayazi ukuba uthetha ngantoni. NdineCerberus kwiifowuni zam ze-Android iminyaka kwaye yenza amaxesha amathathu njengokukhangela i-Apple iPhone yam. Ukusuka ekuthatheni ifoto, ukukubonisa umyalezo, ukufumana uluhlu lweefowuni ezithunyelweyo, ukufumana yonke i-SMS yakho, ukurekhoda ividiyo kunye nezinye izinto ezininzi. Konke oku ngaphandle kwengcambu kunye nee-euro ezingama-3, yile nto ixabisa usetyenziso. Ithunyelwe ukusuka kwi-iPhone 5 😉
Kubonakala ngathi awukwazi ukufunda ... Njengoko benditshilo kwinqaku, kukho ezinye izisombululo kodwa sithetha ngeGoogle esemthethweni. Sele ndiyazi ukuba icerberus ikhona.
Awunangqondo yokujonga izinto. Ndikuxelela ukuba i-Cerberus, enye insiza inika iwaka elijika kwi-Apple esemthethweni okanye kwi-Google app, ukuba ngaphandle, iCerberus yaqaliswa ixesha elide ngaphambi kokufumana i-iPhone yam, uyayiqonda? Ndihlala ndilinde iindaba malunga nebha yesaziso ekotshelwe kwi-Android okanye efanayo.
Ngaba uthetha ngobuchule kum? Yintoni ekufuneka uyifundile. Nguwe othatha umcimbi ukuba ngubani oza kuqala. Iindaba zithetha ngenkonzo kaGoogle, hayi malunga neCerberus okanye nantoni na enjalo. Ukuba ufuna ukuhamba ngeenduli ze-Úbeda, ngokwakho iqabane. Andikhange ndigxeke noGoogle ngokukopa inkonzo ka-Apple, endaweni yoko, ndithe ezi zibonelelo ziyabasebenzisa.
Ukuba nguwe ofuna ukufuna impikiswano, unayo eluhlaza kunye nam.
Ukubulisa kunye neCawe emnandi !!!
Khuphela? Kwimeko nayiphi na into bobabini bakopa kwiCerberus. Njengemodareyitha kufuneka uphendule ngentlonipho engaphezulu kunaleyo uyifumanayo, awunakubekwa tyala ngokuba fanboy, kodwa uyalihlonipha iphepha obhala kulo.
Ndicinga ukuba andihloniphanga mntu. Uxolo, kodwa ngaleyo ndlela ayenzekanga. Ndixelele apho ndingahloniphi khona ngokoluvo lwakho. Into endizoyenza kukuvala umlomo.
Anditsho ukuba ubungenantlonelo, kodwa kukho iindlela zokuthetha ezihloniphekileyo kunezinye, ngokudibeneyo kubonakala ngathi ongakwaziyo ukufunda nguwe. 😉
Ndiyayazi indlela yokufunda ngokugqibeleleyo kwaye ndiphendula ngentlonipho endikholelwa ukuba kufanelekile ukuba ndiyiphendule, ndiyaphinda, andihloniphanga mntu nangona ndikholelwa ekubeni andihlonitshwanga. Enkosi ngengcebiso yakho. 😉
Ithenda leS squidward sitsho
Ches abantwana abancinci, bayalwa nge-XD engenangqondo
UYesu jr sitsho
Iindaba ezimnandi zomntu kodwa zithunyelwe njengomthiyi hayi umntu onolwazi. Uyazi njani i-chipset eya kusetyenziswa yi-iPhone entsha iya kuba nezinto ze-Samsung. Kodwa ke yintoni? Iinkampani ezininzi zenza iithelevishini kodwa inye kuphela eyilwe ngubani, ngoku kwaye yintoni? Nokuba isemthethweni okanye ayisebenzi ngokusemthethweni ukufumana i-android sele ikho. Isamsung ibandakanya inkqubo enjalo yeefowuni kunye neepilisi. Nangona kungenjalo kwezinye ii-androids kwakusele kukudala. Sukwenza izizathu zokuba ibingasemthethweni. Ayinamsebenzi. Zininzi ii -apps ezingekho semthethweni ezisetyenziselwa iios kunye ne-android ngamanye amaxesha ezibaluleke ngakumbi kunezona zisemthethweni.
Phendula uYesu jr